Ahoana ny famindrana ny WhatsApp mankany SD: ampiasao ny fahatsiarovan-tena ivelany fa tsy ny an'ny findainao | Vaovao momba ny gadget
Ny rindranasan-kafatra hafatra dia mijanona eto ary androany dia nanjary fitaovana ampiasain'ny mpampiasa izy ireo na handefasana hafatra na i miantso na miantso video, farafaharatsiny amin'ireo rindranasa manolotra an'io asa io, toy ny tranga misy eo amin'ny sehatry ny mpanjakavavy eo amin'ny tontolon'ny telefaona: WhatsApp.
Miankina amin'ny fitaovana ampiasaintsika sy araka ny fanaingoana napetrakay, mety ho feno vetivety ny finday avo lenta finday, indrindra raha isan'ny vondron'olona marobe isika, vondrona izay matetika nozaraina horonan-tsary sy sary amin'ny ankapobeny. Raha feno ny fahatsiarovana ny fitaovantsika dia voatery izahay afindra WhatsApp ho SD.
Saingy tsy ny fitaovana rehetra no manana an'io karazana olana io, satria Apple iPhones dia tsy manan-tsafidy hanitatra ny toerana fitahirizana anatinyNoho izany, ny fomba tokana hitrandrahana ny atiny izay zakan'i WhatsApp dia ny famafana azy amin'ny fitaovana na ny famafana azy amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny solosaina miaraka amin'ny iTunes.
Na izany aza, ny terminal Android tsy manana olana amin'ny fanitarana ny toerana fitahirizana, Satria ny terminal rehetra dia mamela antsika hanitatra azy amin'ny alàlan'ny karatra microSD, izay ahafahantsika mamindra karazana fampiharana na atiny ao amin'ilay karatra mba hanafahana ny habaka anatiny ao amin'ny terminal, ny toerana ilaina amin'ny fiasa araka ny tokony ho izy.
1 Afindra amin'ny karatra SD ny WhatsApp
1.1 Miaraka amin'ny mpitantana rakitra
1.2 Miaraka amin'ny solosaina
2 Torohevitra hitahiry toerana ao amin'ny WhatsApp
2.1 Zahao ireo toe-javatra WhatsApp
2.3 Avereno jerena tsy tapaka ny galeri-tsary
2.4 Fehezo ny isan'ny vondrona nisoratra anarana
Afindra amin'ny karatra SD ny WhatsApp
Rehefa mametraka rindranasa amin'ny Android izy ireo dia apetraka ao anatin'ny rafitra, tsy azon'ny olona liana indrindra, mba tsy hahafahantsika miditra amin'ireo rakitra fisoratana raha tsy manana ny fahalalana ilaina izahay. Amin'ny fomba fanabeazana aizana, isaky ny mametraka WhatsApp amin'ny terminal Android-tsika isika dia misy fampirimana antsoina hoe WhatsApp noforonina tao amin'ny lahatahiry root an'ny terminal anay, fampirimana izay itahirizana ny atiny rehetra voaray ao amin'ny terminal.
Nandritra ny roa taona, Android dia namela anay hamindra ny rindranasa sasany amin'ny karatra SD, hany ka ny elanelam-potoana ilaina hiasa dia ny karatra fahatsiarovana. Mampalahelo fa vitsy ny fampiharana avelao izahay hamindra ny angona amin'ny karatra SD, ary tsy iray amin'izy ireo ny WhatsApp, noho izany dia terena hampiasa fomba hafa amin'ny fomba hafa amin'ny tanana isika.
Miaraka amin'ny mpitantana rakitra
Afindra ny lahatahiry feno anarana WhatsApp mankany amin'ny karatra fahatsiarovana dia dingana iray tena tsotra izay tsy mila fahalalana firy avy amin'ny mpampiasa. Mila fotsiny ianao mpitantana rakitra, mankanesa any amin'ny lahatahiry root an'ny terminal anay, safidio ny folder WhatsApp ary tapaho izy.
Avy eo, amin'ny fampiasana ny manager manager indray, mankany amin'ny lahatahiry root an'ny karatra fahatsiarovana izahay ary apetaho ny folder. Ity dingana ity mety handany fotoana ela, arakaraka ny habaka iankinan'ity lahatahiry ity amin'ny fitaovantsika ankehitriny. Hiankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny karatra microSD ampiasainay ihany koa izany.
Vantany vao vita ny fizotrany, ny atiny rehetra izay efa notehirizinay tao anaty lahatahiry WhatsApp ho hita eo amin'ny karatra fahatsiarovana, izay ahafahantsika manafaka toerana malalaka amin'ny solosaina. Rehefa manokatra ny rindranasa WhatsApp indray izahay dia hamboarina ao amin'ny lahatahiry faka an'ny fitaovantsika ny fampirimana antsoina hoe WhatsApp satria tsy namindra ny angon-drakitra voatahiry fotsiny izahay fa tsy ilay rindrambaiko ihany.
izany manery anay hanatanteraka tsy tapaka ity fomba ity, indrindra rehefa manomboka mampitandrina antsika hatrany ny terminal fa ambany kokoa ny habaka fitahirizana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, maro ireo mpanamboatra izay manome ho anay mpitantana rakitra, ka tsy ilaina ny manatona Google Play vao afaka mamindra ny WhatsApp amin'ny karatra SD.
Raha ny terminal anao Tsy manana mpitantana rakitra, iray amin'ireo tsara indrindra misy ankehitriny ao amin'ny Google Play Store dia ny ES File Explorer, mpitantana rakitra izay ahafahantsika manao asa miaraka amina rakitra amin'ny fomba tena tsotra sy haingana, na dia voafetra be aza ny fahalalan'ny mpampiasa.
Miaraka amin'ny solosaina
Raha tsy te-hisintona fampiharana izay tsy hampiasaintsika amin'ny solosaintsika isika, na ny mpitantana ny rakitra tafiditra ao amin'ny terminal dia sarotra kokoa noho ny mety ho izy dia afaka misafidy foana ny hamindra ny atiny WhatsApp ao amin'ny karatra SD amin'ny alàlan'ny solosaina. Mba hanaovana izany dia mila mampifandray ny smartphone fotsiny amin'ny solosaintsika isika ary mampiasa Famindrana rakitra Android.
Android File Transfer dia fampiharana izay Google mametraka eo am-pelatanantsika amin'ny fomba iray tena malalaka ary ahafahantsika mamindra mora foana ny atiny avy amin'ny fitaovantsika mankany amin'ny smartphone na ny mifamadika amin'izany tsy misy olana ary miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka. Raha vantany vao nampifandraisinay tamin'ny fitaovana finday avoakanay ny fitaovana, dia hanomboka ho azy ny fampiharana. Raha tsy izany dia tsy maintsy tsindrio ilay kisary mba hampandeha azy.
Ny fampiharana hasehony anay mpitantana rakitra miaraka amin'ny atiny rehetra amin'ny finday avo lenta, atiny izay ahafahantsika manapaka sy mametaka amin'ny solosaina sy amin'ny karatra fahatsiarovan'ny terminal misy antsika, izay ahazoana miditra ihany koa ilay rindranasa. Mba hamindrana ny atiny WhatsApp ao amin'ny karatra SD, mila mandeha any amin'ny folder WhatsApp fotsiny isika ary tsindrio ny bokotra totozy havanana amin'ny Cut.
Manaraka izany, mankany amin'ny karatra SD izahay, avy amin'ny rindrambaiko mihitsy ary ao amin'ny lahatahiry root dia tsindrio havanana izahay ary safidio ny Mametaka. Raha somary manahirana ity kopia sy paty ity dia afaka manao izany isika hisintona ny fampirimana WhatsApp avy amin'ny fahatsiarovan-tena ao anatiny mankany amin'ny karatra SD an'ny terminal. Mandra-pahoviana ny fizotran'ny asa dia miankina amin'ny hafainganan'ny karatra sy ny haben'ny lahatahiry. Ny famaritana ireo fitaovana ampiasantsika an'io asa io dia tsy misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny fizotrany.
Torohevitra hitahiry toerana ao amin'ny WhatsApp
Zahao ireo toe-javatra WhatsApp
Alohan'ny handefasana ny atin'ny WhatsApp, tokony hiezaka ny hisoroka ny ekipantsika tsy hameno haingana ny horonan-tsary sy sary indray isika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny safidin'ny WhatsApp sy ao amin'ilay faritra isika Fampidinana automatique ny haino aman-jery mifidy amin'ny horonan-tsary na oviana na oviana.
Amin'izany fomba izany, tsy ho afaka hitahiry ny tahan'ny finday fotsiny isika, fa hisoroka ny horonantsary, ny karazana rakitra izay be mpitovo indrindra, alaina ho azy ao amin'ny fitaovantsika na dia tsy liana amin'ny kely indrindra aza izahay.
Safidy iray hahafahanao mahita ireo horonan-tsary alefa any amin'ny iray amin'ireo vondrona misy antsika, indrindra raha tena mahomby izy ireo amin'ity karazana rakitra multimedia ity dia ny fidirana amin'ny alàlan'ny WhatsApp Web miaraka amin'ny solosaina. Rehefa miditra amin'ny WhatsApp Web, ny atiny rehetra alaina ao amin'ny solosainay dia cache, ka tsy ho ilaina ny mampidina azy amin'ny solosaintsika mba hahafahana manampy azy amin'ny horonan-tsary hafa ary hihena haingana ny toerana fitahirizan-tsaintsika.
Avereno jerena tsy tapaka ny galeri-tsary
Na amin'ny iOS na Android, WhatsApp dia manana ny hafaliana tsy manontany anay raha te handrindrina ireo horonan-tsary sy sary amin'ny fitaovantsika izahay, fa mikarakara azy io ho azy, izay mahatonga izany rehefa mandeha ny fotoana mihena ny habaka ekipanay. Ity hetsika ity dia manery anay handinika tsindraindray ny galerianay mba hamafana ireo horonantsary sy sary rehetra azonay tamin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra ary azo jerena ao amin'ilay fampiharana ihany.
Ny rindranasa hafa, toy ny Telegram, dia mamela antsika handrindra ny rindranasa mba hahafahan'ny atiny rehetra azontsika aza mitahiry mivantana ao amin'ny galerianay, izay ahafahantsika mitahiry ao, ireo sary sy horonan-tsary tena tadiavintsika ihany. Ho fanampin'izany, ahafahantsika manafoana matetika ny atiny rehetra voatahiry ao amin'ny cache an'ny rindrambaiko, mba hampihenana ny habeny amin'ny fitaovantsika.
Fehezo ny isan'ny vondrona nisoratra anarana
Ny vondrona WhatsApp no ​​olana lehibe indrindra rehefa mameno haingana atiny fanampiny izay tsy nangatahinay ny fitaovantsika, ka mety foana ny tsy ho anisan'ny vondrona misy atiny multimedia alefa kokoa noho ny hafatra an-tsoratra, raha mbola azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamindra WhatsApp amin'ny karatra SD
Autonomous Ready Spain, ilay tetikasa mampifandray an'i Barcelona amin'ny fiara mizaka tena